Ajaja " Mul'annoo Saxaxaatiin Gabaasa Uumi" tiin jalqabe.
Ajaja " Gabaasa Uumuuf Masaka Fayyadami" tiin jalqabe.
Irraantoowwan fi jalaantoowwan gabaasaa, irraantoowwan fi jalaantoowwan fuulaa, Gabaasota tarjaa-hedduu fayyadamuuf dhodhommoqxummaa guutuu.
Galmee gabaasaa uumuuf qajoojii Barreessaa fayyadama.
Dirreewwan kuusaa yookiin miseensota saxaxaa kanneen biroo kan akka fakkiilee yookiin sararootaa qubachiisuuf harkisanii kaa'uu fayyadami.
Kuusaawwan deetaa qindeessuuf filannoowwan kennaman hedduu keessaa filadhu.
Fanyartuu yeroo-tokkoo deetaa uuma. Gabaasa haromsame ilaaluuf, galmee Barreessaa deetaa haromsameen uumuuf irra deebiiti galmichuma hojjoomi.
Deetaa dhaabbataatiin fanyartuu yeroo-tokkoo uumuuf filachuu ni dandeessa, yookiin gabaasa "live" geessituuwwan deetaa ammaa waliin yommuu faayilicha Bu'uuraa bantu.
Gabaasicha akka galmee barruu Barreessaa tti ol kaa'a.Odeefannoo akkamitti gabaasa faayilicha Bu'uuraa keessaatti uumuu danda'amu kuusa.
Gabaasaa fi odeeffannoo akkamitti gabaasa faayilicha Bu'uuraa keessaatti uumuun danda'amu ol kaa'a.
Baafata halqaraa keessaa Bani fili yookiin deetaa ammatiin gabaasa haaraa uumuuf maqaa gabaasichaa lama cuqaasi.
Baafata halqaraa keessaa Bani fili yookiin yeroo uumama jalqabaa irraa irradeebiitee fanyartuu dhaabbataa deetaa ilaaluuf, yookiin deetaa ammaatiin gabaasa haaraa uumuuf maqaa gabaasichaa lama cuqaasi.Kuni filannoo ke dhuma fuula masakichaa irra jiru irratti hundaa'a.
Foddaa Ijaaraa Gabaasaa kan odeeffannoo gabaasaatiin fe'aman banuuf baafata halqaraa maqaa gabaasaa keessaa Gulaali fili.
Faayiilii qajoojii Barreessaa kan gabaasicha uumuuf fayyadu gulaaluuf maqaa gabaasaa baafata halqaraa keessaa Gulaali fili.
Title is: Gabaasota Uumuu